Semalt: 10 Email & Internet Scams & Nyocha; Olee otu esi echekwa?
Ozi ịntanetị Spam aghọwo usoro eji eme ihe n'iji cybercrime na internet. Twitter na Facebook dị ka nchịkwa na-eduga maka ịkparịta ụka n'Ịntanet bụ ụzọ ọhụrụ na cybercriminal mgbe emails emetụla ochie.
Onye isi ahịa ahịa nke Semalt , Ryan Johnson, na-akọwa ọnụọgụ email na ịntanetị na otu esi zere ha - doccia solare giardino di.
1. Ọgba agba agba
Email spam nke a na-ahapụta site na ụlọ ọrụ na-agba chaa chaa na-ekele ma kwupụta ego merie site n'onye ahụ ọbụna mgbe ha na-etinyeghị aka na ọrụ ịgba chaa chaa ọ bụla.
Email spam bụ ihe ojoro ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla, aha aha ahụ anaghịzi efu, ịgba chaa chaa adịghị adị, ozi elele na - ajụkwa maka ozi gbasara onwe gị.
2. Scam Survey
Ụfọdụ ozi ịntanetị spam nke na - eduga n'ịghọ aghụghọ nwere ike ịbịa dị ka òkù maka ọrụ nnyocha. Na ịpị njikọ ahụ na-ebudata usoro ihe omume nke nledo na mmemme na kọmputa na-eduga na izu ohi nke okwuntughe, ozi akụ na ozi nkeonwe nke na - akpata ego efu.
3. PayPal ma ọ bụ Scam Egwuregwu Ịntanetị
Otu email nke yiri ka ọ bụ ihe ziri ezi site na nnyefe ego n'ịntanetị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ kaadị nwere ike ịrịọ maka mmemme ngwa ngwa. Ozi nke onye ahụ mejọrọ na-ejedebe ịme ka akaụntụ ha ghara ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ izu ohi.
N'ọtụtụ ọnọdụ, adreesị nke onye na-ezigara gị na-enyo enyo, email ahụ enweghị onye nnọchiteanya ọ bụla, njikọ ejikọta abụghị ihe ziri ezi, na ozi-e na-agụnye ihe iyi egwu nye onye ahụ.
Akara email nke na-ekwe nkwa ego iji mee ihe omimi ọrụ online bụ ojoro..Ndị scammers kwere nkwa ịkwụ gị iji zụọ ahịa n'ịntanetị. Otú ọ dị, ọ dị onye mkpa ịkwụ ụgwọ maka ọzụzụ, ma ọ bụ ha na-enye adres ha iji nweta ego nlele.
5. Ọkachamara mba ọzọ
Email a spam na-agụnye onye na-eziga ụda eze nke chọrọ enyemaka iji weghachite ego buru ibu na akaụntụ netsea. A na-arahụ onye a na-edeba aha ka ọ gaa zipu ego ugboro ole na ole n'emezigharị ego ahụ.
6. Nkọwa Na-agbanye Aka
Ndị na-ese foto na weebụ nwere ike ịnyaghachị akaụntụ mgbasa ozi ọha na eze iji rịọ maka ihu ọma site na ndepụta ndị enyi na akaụntụ ahụ. Ndị na-eme atụmatụ aghụghọ na-ezipụ ego iji nyere ndị enyi ha aka ka ha ghara inwe obi ụtọ.
E wezụga ozi ịntanetị spam, ndị na-aghọ aghụghọ na-eziga njikọ gbasara egwuregwu na egwuregwu nke chọrọ nọmba ekwentị. Itinye aka n'egwuregwu ndị a na-ekpughe onye ọrụ ahụ na aghụghọ.
8. Scam na-enyo enyo
Ozi na-awụ akpata oyi n'ahụ nke na-ekere òkè na mgbasa ozi mgbasa ozi na-akpata ọchịchọ ịmata ihe. Ozi nke na-egosi mgbasa ozi nke foto nke onye ọrụ ahụ na - eme ka ịchọta njikọ na - ekpuchi ha ka ha na - egwu.
9. Ejiri Ntuzi URL zoro
Ị nwere ike ịnweta oku Twitter site n'aka onye ọrụ enyo. Ntinye njikọ ha na-eduga gị na weebụsaịtị ndị nwere ike ịnweta ngwa spyware ma ọ bụ malware na-enweghị ihe ọmụma gị.
10. Ọrịa Ọrịa Sick
Ihe osise nke nwa na-arịa ọrịa na mgbasa ozi na-arịọ maka inye onyinye maka ego. Ndị mmadụ na-emetụ ozi ahụ aka ma na-ekerịta ozi ọma na ndị ọzọ na-amaghị na ọ bụ ojoro.
Iji nọrọ na nchebe, wepụ ozi ịntanetị na-adịghị akwado, ekweghị na onyinye na nkwa nke ego site na ndị ala ọzọ, na-achọ ihe ọ bụla ịrịọ maka ego online,